Achọrọ M Ka Ndị Ahịa Ga-akwụsị Thissị Nke a ... | Martech Zone
Mụ na Jenn gara n’isi ụlọ ọrụ nke Ndị Genes Izu a wee nọdụ ala ha ahịa ahịa dijitalụ ha na otu n'ime ajụjụ ndị gbasiri ike bụ ma ọ bụrụ na anyị etinye ihe omuma ihe n'azụ ndebanye aha. Nnyịn ima isọsọp ibọrọ ite ke akananam nnyịn inamke oro. Ndị otu mmekọrịta ahụ kwuru na ha ga-eme nnwale na ma a whitepaper na infographic na 0% debanyere aha ma budata akwụkwọ akụkọ ahụ wee debanye aha 100% iji lelee infographic ahụ.
M hụrụ n'anya nke ukwuu mgbe anyị zutere otu ndị na-egbochi ọnọdụ dị iche iche ma nwalee ihe dịka nke a. Ọ dị oke mkpa na anyị, dịka ndị na-ere ahịa, na-emegide ajọ mbunobi anyị ma ọ bụ akụkụ nke nkasi obi ma na-agbasi mbọ ike iji nwalee ọnọdụ ọ bụla.
Izu a, Banye weputara mkparita uka ha mere m Big Data na ahia na nke a bu isiokwu m nwere obi uto. Na Nnukwu data, ndị na - ere ahịa nwere ike ibute data nke oge ya na mpịakọta 4 V's, ụdị dị iche iche, ọsọ ọsọ na eziokwu. Enweghị ihe kpatara ndị ahịa na ngwa iji nwalee ma tụọ ọ bụla mmekọrịta ugbu a.
Nkwupụta m chọrọ ka ndị ahịa kwụsị ịkwụsị bụ,
Anyị nwara nke ahụ ma ọ naghị arụ ọrụ.
M na-ajụ ajụjụ nkọwa ha nwara nakwa ajụjụ ha arụghị ọrụ. Anyị nwere otu atụmanya, dịka ọmụmaatụ, nke kwuru na ha emeghị SEO n'ihi na atụmanya ha niile sitere na Facebook. Ajụrụ m ebe ha na-etinye ha niile mmefu ego… bụghị suprisingly ọ bụ ihe niile na Facebook. Ọfọn, nke ahụ apụtaghị na nchọta ahịhịa arụghị ọrụ, ọ pụtara na etinyeghị ihe onwunwe iji nwalee ya n'ezie wee hụ ma enwere ROI dị mma. Nke ahụ bụ nnukwu ọdịiche.
N'akụkụ nke nkwupụta ahụ bụ ndị ọzọ:
Anyị na-enweta azụmahịa anyị niile site na ntụaka na okwu ọnụ.
Mgbasa mgbasa ozi anaghị arụ ọrụ.
Anyị enweghị oge iji zụlite ọdịnaya.
A obere investigative na nke a na-ahụta saịtị ahụghị na search, ọ dịghị ọdịnaya azum, efu ozi kọntaktị ma ọ bụ ndị na-abụghị ndị na-arụ ọrụ ụdị na website, mba email ahịa mmemme… ọ bụghị ihe ijuanya na azụmahịa gị niile na-abịa site na ntụgharị okwu na okwu ọnụ! Enweghị ụzọ ọzọ iji soro gị zụọ ahịa n'ịntanetị!
A afọ ole na ole gara aga, m ga-eme mkpesa na nsogbu na nchịkọta bụ na ọ bụ naanị dị ka ọgụgụ isi dị ka onye ọrụ nwere ahụmahụ na ọkaibe iji ya. Gbaa a akụkọ na-enweghị igwu ala miri, na i nwere ike ime ka ụfọdụ egwu mkpebi iji nchịkọta. Ime mkpebi siri ike chọrọ mmejuputa iwu siri ike nke nchịkọta na nyopụta data chọrọ ahụmịhe. Nchịkọta bụ ngwá ọrụ dị ukwuu maka na-arịọ ajụjụ, ma a egwu ngwá ọrụ ịchọta azịza.
Nnukwu data, nyiwe njikwa data, dashboard na ngwa ndị ọzọ na - abịa n’ihu. Banye na-edozi nsogbu ogo data nke otu dị iche iche site na ịsacha data ha - de-duping, ịhazi, ịhazi, ịhazi na nyocha - na akpaghị aka ma na-aga n'ihu. Ihe niile ịchọrọ ịmalite n'ụzọ dị irè iji tụọ ma na-eme mkpọsa ahịa ahịa kacha mma dị ugbu a.
Otu ụlọ ọrụ na-adọrọ adọrọ m zutere n'oge na-adịbeghị anya bụ Ọhụ - ndị na - enyocha ego nke otu ụlọ ọrụ na - emegide ihe ndị dịka mbọ ahịa ha ka ha wee hụ etu ha si atụnyere ha na asọmpi na ụlọ ọrụ ha. Chegodi inwe ike igosi bọọdụ gị na ahia ịre ahịa dị n'okpuru nkezi ma ọ bụ ọnụahịa gị kwa ndu na uto karịrị ụlọ ọrụ ahụ! Ihe ngwọta ndị a dị anyị ugbu a.
Ihe adịghị adị, agbanyeghị, bụ ikike na akụrụngwa iji igwe na ụzụ.
Talent siri ike ịchọta karịa ngwaọrụ. Inwe ndị nyocha azụmaahịa nwere ike ịnwale nke ọma, tụọ ma chee echiche na-esiwanye ike karịa mgbe ọ bụla. Ajụjụ ọnụ ReachForce
Anyị na ụlọ ọrụ ndị na-agba izu na-arụkọ ọrụ Perscio, ndị na-emepe ụdị ndị dị ịtụnanya maka nyocha amụma nke ndị na-ere ahịa ga-enwe ike iji nke ọma ghọtakwuo ụzọ obe ha ga-esi hụ etu mgbanwe na azụmaahịa ahịa ha ga-esi metụta nsonazụ na oke ịtụnanya.
Ọnụ ọgụgụ na-emenye ụjọ nke ụlọ ọrụ anyị na-agba ajụjụ ọnụ ma na-arụ ọrụ agaghị atụ ma, kama, ka na-azụ ahịa site n'úkwù. Ndị a abụghị Mama & Pops… ụfọdụ n’ime ha bụ ụlọ ọrụ Fortune 500. Ha na-ezere usoro nnwale egosiri ma wepụta usoro ga-eme ka mkpebi azụmaahịa ha ka mma n'ihi na usoro ndị ahụ na-enyekwa usoro ịza ajụjụ maka ịkọwapụta. Ha bụ ụdị ndị isi na nitpick na otu ihe si dị ma ọ bụ ụda, na-egbu oge igbu usoro ahụ na atụ mmetụta n'ihi na ha enweghị ntụle etu ọ ga-esi rụọ.
Dị ka ndị ahịa, anyị nwere ike ime nke ọma. Anyị ga-eme nke ọma. Ngwaọrụ dị!
Tags: nnukwu dataahia uzo ahiaịdị ọcha datanhazi usoro nhazi datadmpọgụgụ isi mmekọrịtandị ahịangọpụ ahịanlele anyaogbarairusi
Mee 7, 2015 na 10: 11 AM
AMIN! Ọ dị nwute na m na-anụ ihe a mgbe niile. "Anyị nwara nke ahụ afọ 10 gara aga ma ọ naghị arụ ọrụ." M na-anụkarị ya site n'aka ndị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ a maka afọ 15+. Kedu ka anyị ga-esi mee ka ndị mmadụ na-atụ anya ma ghara ịla azụ? Ma ọ bụ tụkwasị obi na echiche ọhụrụ nwere ike gbanwee echiche ochie ka ọ bụrụ nke dị mma?
Mee 11, 2015 na 3: 21 PM
"Ọfọn, ọ bụghị ihe ijuanya na azụmahịa gị niile na-abịa site na ntinye aka na okwu ọnụ! Ọ nweghị ụzọ ọzọ ị ga-esi na-azụta gị n'ịntanetị!"
Nke a! Nke a! Otu nde ugboro a!
Anụla m imerime ndị isi ọrụ condescend m na ahịrị banyere otú “nke ahụ abụghị otú o si arụ ọrụ na ụlọ ọrụ anyị. 98% nke azụmahịa anyị sitere na ịkpọ oku oyi. "
Ee… Mgbe ị na-ekenye 98% nke mmefu ego ndu ụzọ gị na ebe oku, nke ahụ na-emekarị.
Doug - Ị tụlere ịme usoro mmụta gbasara etu ịntanetị si eduga azụmaahịa? Na ọnụ ọgụgụ nke ndị isi na-aghọtaghị ihe ndị bụ isi, echere m na ị ga-egbu! 🙂
Jenụwarị 31, 2018, elekere 5:17 nke abalị
Edemede a na-ejikọta na Interactive Intelligence, nke Genesys zụtara na Disemba 2016. Maka ozi ndị ọzọ gbasara nnweta a, biko gaa na: https://www.genesys.com/inin